Kitra – Fankasitrahana mpilalao :: Lasan’i Lionel Messi faninenina ny «Ballon d’or» • AoRaha
Voafidy ho mpilalao mendriky ny taom-pilalaovana 2019 i Lionel Messi, teratany arzentina milalao ao amin’ny FC Barcelone (Espana). Amboara fahenina ho azy (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019) ity nalainy nandritra ny lanonam-panolorana tao amin’ny efitrano fanaovana teatran’i Châtelet, any Paris (Frantsa).
Voatolotra, omaly, ny “Ballon d’or” faha-64, avy amin’ny gazety mpiseho isan-kerinandro France Football, any Frantsa.
Isan’ny tombony ho an’ ity mpilalao 32 taona ity ny naha voahosotra azy ho tompondakan’i Espana niaraka tamin’ny FC Barcelone sy ny namonoany baolina betsaka indrindra (36 isa) ary ny niakaran’ny kliobany ho eo amin’ny manasa-dalan’ny fiadiana ny ho tompondakan’ i Eoropa na ny “UEFA Champions League”. Teo ihany koa ny efa naha voahosotra azy ho mpilalao mendriky ny Fifa na ny “The Best”, tamin’ity taom-pilalaovana ity.
Isan’ireo nifanandrina akaiky taminy, tao amin’ny “Top 10”, ireo mpilalao afrikana telo dia i Mohamed Salah (Ejipta) sy Riyad Mahrez (Alzeria) ary Sadio Mané (Sénégal). Tany amin’ny tapany faharoan’ny filaharana kosa no nisy an’i Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) sy Kalidou Koulibaly (Sénégal), mpilalao afrikana isan’ ireo tao anatin’ny lisitry ny telopolo mirahalahy hiady an’ity amboara ity. Mbola sarotsarotra ho an’ny Afri­kana, taorian’i Georges Weah (1995), ny hahazo an’ity anaram-boninahitra manokana ity.
Tsy isan’ireo nanatrika ny lanonana i Sadio Mané sy i Cristiano Ronaldo. “Mifa­nindry amin’ny fanolorana ny mpilalao mendrika any Italia ny an’ny France Football ka tsy afaka i Ronaldo”, araka ny nambaran’ireo gazety avy any amin’ity firenena ity. Talohan’io anefa dia efa niparitaka ny feo fa: “raha mbola i Messi no hahazo ny amboara dia tsy ho avy i CR7”.
Voalohany tamin’ireo teratany frantsay efatra mirahalahy nifaninana kosa i Kylian Mbappé, tafiditra ho isan’ireo “Top 10”. Tany amin’ny laharana faha-18, faha-23 ary faha-26 ry Antoine Griezman sy Hugo Lloris ary Karim Benzema, mpiray tanindrazana aminy.
I Allison Becker, mpiandry tsatokazon’ny Liverpool FC, indray no nahazo ny “Trophée Yachine”, izay vao noforonina tamin’ity taona ity. Voahosotra ho mpilalao tanora mendrika indrindra indray i Matthijs De Ligt (Ajax Amsterdam, Juventus). Ilay teratany amerikana, Megan Rapinoe (Reign FC, Etazonia), kosa no nahazo ny amboara teo amin’ny sokajy vehivavy.
CAN 2021 Hanahirana an’ireo firenena afrikana ny haka mpila ravinahitra
Baolina kitra-« Orange Pro League » Hiatrika klioba roa misesisesy ny Fosa Juniors FC
Baolina lavalava- tanora Hizara omby dimy ambin’ny folo ny fikambanana ambany tanàna
Kitra – « Malagasy Pro League» :: Horaisin’ny Ajesaia etsy Mahamasina ny Fosa Juniors
Atletisma- Olimpika :: Hanatsara zava-bita any ivelany i Sidonie sy Claudine